Arfiilee barruu duudhaa Chaayinaa gara Arfiilee barruu duudhaa Chaayinaatti hiika. Barruu filame hiikuuf TOLE cuqaasi. Yoo barruu homtuu filatame, galmeen hundi filameera.
Jechoota arfiilee lamaa fi isa ol tarree haala dubbii waliinii keessaa hiika. Erga tarreen kaafamee booda, barruun hafe arfii arfiidhaan hiikameera.
Haala dubbii gulaali
Bakka tarree hiikkaa haalotaa gulaaluu dandeessutti qaaqa Galmee hiikaa jechootaa Gulaaliibana.